February 12, 2021 - Babal Khabar
Feb122021 by बबाल खबरNo Comments
मासु खानेहरूको लागी अायो निकै नै दु’खद खबर, अवश्य पढनुहोला
काठमाडौँ – काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका– स्थित साङलेखाला छापका किसानले पालेको कुखुरा र हाँसमा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको छ । तारकेश्वर–१ स्थित साङलेखाला छापका किसान प्रल्हाद तामाङ, उनका छोरा सुमन तामाङले पालेको हाँस र कुखुरामा ब'र्डफ्लु पुष्टि भएको तारकेश्वर नगरपालिका पशु शाखा प्रमुख धनिपत रायले बताए । केही दिनअघि स्थानीय किसानले पालेको हाँस र कुखुराको नमूना त्रिपुरेश्व रस्थित प्र'योगशा'लामा परीक्ष'णका लागि पठाएको थियो । परीक्षण पछि हिजो बेलुका बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको हो । बर्डफ्लु पुष्टि भएसँगै ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ ले एक हजार ४०० हाँस र ६५ कुखुरा न ष्ट गरिएको बताइएको छ । बर्डफ्लु प्र'भावित क्षेत्रका फार्ममा चुना र ‘भिर्काेन स्प्रे’ छर्ने काम भइसकेको प्रमुख रायले जानकारी दिए। केही दिनअघि तारकेश्वर– ७ स्थित साङ्ले खाला, फटुङका किसानले पालेका टर्की हाँसमा बर्डफ्लु पुष्
श्वेतालाई खपि नसक्नु भयो, भनिन् – “जुत्ताको माला सहित कालो मोसो दलिदिनु”
काठमाडौँ – अभिनेत्री श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको झ्याँडीमा निर्माण भइरहेको माझीबस्ती आफ्नो मन मस्तिस्कबाट कहिले पनि नहट्ने बताएकी छन्। माझी बस्तीबाट श्वेता पन्छिन लागेको भन्दै समाचार आएपछि सो बारे सामाजिक संजाल मार्फत स्प'ष्टिकरण दिँदै श्वेताले यस्तो बताएकी हुन्। माझी बस्तीका केहि व्यक्तिहरुसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई इडिट गरेर एकिकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै अ'सर पार्ने खालका नकारा'त्मक सूचना सम्प्रेषित भएको उनको भनाई छ। ‘श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाईन्’ भन्दै आएका समाचारलाई श्वेताले भ्रा'मक भनेकी छन्। “भुकम्प'ले भा'ताभु'ङ्ग बनाएको उदा'स र उदे'क लाग्दो त्यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तिको रुपमा यो बस्तिले आफ्नो स्वरुप धारण गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर ‘श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाईन्’ भन्ने भ्रामक समाचार आउनु आँफैमा हास्या'स्पद छ । मैले यस्लाई माझी बस्ती र
मेवा मात्र होइन यसको दाना पनि हुन्छ स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त लाभदायक ! कसरी प्रयोग गर्ने ?
मेवा प्राय: सबै मानिसलाई मन पर्ने फल हो। मेवामा भरपूर मात्रामा आइरन, क्याल्सियम र म्याग्नीशियम हुन्छ जसले हाम्रो श'रीर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि केवल मेवा मात्र फाइदा जनक छैन तर यसको दाना पनि निकै लाभ दायक मानिन्छ। मेवाको दानाको सेवनले धेरै रो'गहरू हटाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईंलाई मेवाको दानाका फाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेका छौं … मेवाको दानामा एन्टिअक्सी डेन्टहरू पाइन्छन् जसको सेवनले चिसो, रुघा, खो'की जस्ता संक्र'म'णहरूबाट छु'ट'कारा पाउन सकिन्छ। मेवाको दाना कलेजोको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यदि तपाईले मेवाको दानाको सेवन गर्नुभयो भने कलेजो सम्बन्धि स'स्याले कहिल्यै स'ताउँदैन। साथै, जो मानिस कलेजोको समस्याबाट पी'डित छन्, तिनीहरूले दैनिक रूपमा बिहान खाली पेटमा मेवाको दाना सेवन गर्नुहोस्। मेवाको दाना खाँदा र'क्त'चाप निय'न्त्र'णमा रहन्छ। यस्तो अवस्थ